Okufanele Ukwazi Ngomthetho Womndeni | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Odinga Ukwazi Ngomthetho Womndeni
Umthetho womndeni ubhekana nezinkinga zomndeni ezifana nesehlukaniso, umshado, ukutholwa kanye nokubambisana ekhaya. Imvamisa, umthetho womndeni ubandakanya izinhlaka ezihlobene negazi noma umshado kodwa futhi zithinta labo abasebudlelwaneni obude noma obujwayelekile.
wena nabathandekayo bakho ungaqiniseka
Ukubhekana nezinkinga zomndeni
Njengoba izindaba zomthetho womndeni zizwele kangangokuba kudinga ukunakekelwa okwengeziwe ngokuqonda okungokomthetho. Kodwa-ke, ngosizo lochwepheshe bezomthetho abathembekile, wena nabathandekayo bakho ungaqiniseka ngokumelwa okufanele nokuvikelwa kwinqubo yezomthetho.
Kukhona abameli bemindeni abanolwazi eDubai, eSharjah, e-Abu Dhabi, nakwamanye ama-Emirates e-UAE abanakekela ngokwengeziwe ngenkathi bebhekene nalezi zinkinga zomndeni. Bazizwa ngokungathi sína nokuzwela kwecala futhi baqondise abantu abathintekayo.
Kulesi sihloko, sizokuqondisa ukuthi uqonde kangcono ukuthi kungani udinga ummeli womndeni kanye nenqubo yezomthetho elandela ezingxabanweni eziningi zomndeni.
Kungani Sidinga Ummeli Womndeni?
Izizathu ezivame kakhulu zokuqasha ummeli womthetho womndeni zifaka:
Uma kukhulunywa ngezinkinga zesehlukaniso, abalingani abazobandakanyeka bazoqasha ummeli ohlukile ozokwenza uhlelo oluhle kakhulu lokuxazululwa komhlaba ukuze kugwemeke ukuqulwa kwecala. Futhi, abameli besahlukaniso banekhono ekwabelaneni ngezinto zomshado, bahlola ukusekelwa komshado, futhi balungiselela uhlelo lokugcinwa kwengane, ukuxhaswa nokuvakasha (uma kunesidingo).
Ukuxhaswa Kwengane / Ingane
Imiyalo yenkantolo nesivumelwano sokuxazulula okubandakanya ukugcinwa kwengane nokusekelwa kuvame ukufakwa emacaleni amakhulu okuhlukanisa, kepha, angalungiswa njengoba icala liqhubeka. Isibonelo, ukwesekwa kwengane kungalungiswa ngokulandelayo lapho isimo sezimali somzali ongeyena umgcini sishintsha.
Amacala obaba ngokuvamile afakwa ngumama kaningi emzamweni wokuvikela ukukhokha okusekelwa kwengane kubaba ongekho. Futhi, kwesinye isikhathi ubaba ufakwa kubaba ukuze abe nobudlelwano nengane yabo. Ngokuvamile, ukuhlolwa kwe-DNA yilokho okusetshenziselwa ukunquma ubunikazi babantwana.
Ukunakekelwa Kwabazali Abangabazali
Ukunakekelwa kokutholwa noma ukunakekelwa kwengane yingane kuyinqubo eyinkimbinkimbi, futhi kuyehluka ngohlobo lokutholwa, lapho ingane ivela khona, umehluko emithethweni yombuso, kanye nezinye izimo ezithile. Kubalulekile ukuxhumana nommeli womndeni. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi abantu bamukela izingane zabo ngokuzikhulisa ngaphandle kwezimfuneko zomthetho phakathi nenqubo.
Umhlahlandlela Wakho Kumacala Omndeni
Ikomidi lokuqondisa Umndeni liyisigaba sokuqala senqubo yezomthetho yesehlukaniso. Uma kubandakanya izindaba zomndeni, izinkantolo zasekhaya azikwazi ukufinyelelwa ngokuqondile, kunalokho, iKomidi Leseluleko Somndeni kumele lithole isitifiketi sokuphikisa noma incwadi yokudlulisa ngaphambi kokuya enkantolo.
Ummangali udinga ukuthatha la madokhumenti alandelayo eKomidini Lezeluleko Lomndeni:
Isitifiketi sokuqala somshado / inkontileka.
Qaphela ukuthi uma umshado wawenziwa ngaphandle kwe-UAE, uMnyango Wezangaphandle kulelozwe kufanele ube semthethweni futhi uqinisekise ukufakazelwa yinxusa le-UAE kulelozwe.
Futhi, lowo mbhalo kufanele ufakazelwe nguMnyango Wezangaphandle Wase-UAE, ozohunyushelwa olimini lwesi-Arabhu bese kuthi uMnyango wezoBulungiswa ube usuwuqeda.
Indoda nomkayo kulindeleke ukuthi beze mathupha
IKomidi Lokuqondisa Umndeni linikeza usuku lokulalelwa kwelinye iqembu. Lapho ummangali esefake isicelo, umyeni nenkosikazi kulindeleke ukuthi beze phambi kwekomidi futhi ngeke bamelwe ngamalungu omndeni noma abameli.
Uma elinye iqembu lingaveli ngosuku lokulalelwa, olunye usuku olungaphezulu lunganikezwa yiKomidi Leziqondiso Zomndeni ngaphambi kokukhipha incwadi ethi Akukho Okwenqaba ukufaka icala lomndeni. Uma isaziso esinjalo sithunyelwa kummangalelwa, kuyadingeka ukuthi izeluleko zomthetho zamukelwe ngummangalelwa ngaphambi kosuku lokulalelwa.
Amakhodi wokuziphatha e-UAE
Amakhodi wesiko nokuziphatha e-UAE kufanele abhekwe ngenkathi kusondela ekomitini lokuqondisa umndeni. Bobabili abesilisa nabesifazane kulindeleke ukuba bagqoke kahle.
I-NOC ivumela ummangalelwa ukuthi afake icala enkantolo
Esimweni lapho bobabili abathintekayo beye eKomidini Lezeluleko Lomndeni futhi bengakwazi ukuthola isixazululo esivumelanayo, kukhiqizwa incwadi ethi No Objection Letter yikomidi Leseluleko Somndeni. Le NOC ivumela ummangalelwa ukuthi afake leli cala enkantolo futhi aqale inqubo engokomthetho yesehlukaniso.
funa usizo lommeli
Uma kwenzeka amaqembu enza isixazululo esivumelekile futhi elungele ukusayina isivumelwano sokuxazulula leyo mali, kubaluleke kakhulu ukuthi afune usizo lommeli ngaleso sikhathi.
Isivumelwano sokuxazululwa kwaleli cala sisayinwa phambi kwejaji elivela eMnyangweni Wokuqondiswa Komndeni futhi ligcinwe efayilini lawo kuzo zonke izinkomba zesikhathi esizayo ngamakhophi amabili anikezwe amaqembu.
Umthetho Wezomndeni, Ukubuyisana, Amacala Ohlukaniso, Ukulandelana Namafa
Ungaqiniseka ukuthi zethu abameli bemindeni uzokuqondisa